Otu esi etinye Spotify na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
November 28, 2021 November 16, 2021 by Jọshụa James
Nhọrọ 1 - Wụnye Spotify na APT
Nhọrọ 2 - Wụnye Spotify na Flatpak
Nhọrọ 3 - Wụnye Spotify na Snapcraft
Otu esi ebido Spotify
Spotify bụ ọrụ nkwanye egwu dijitalụ nwere ma n'efu yana njiri akwụ ụgwọ. Ọ bụ onye na-eweta ọrụ nkwanye egwu kachasị n'ụwa, nwere ihe karịrị nde 381 ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike kwa ọnwa, gụnyere nde 172 na-akwụ ụgwọ ndị debanyere aha, dị ka nke Septemba 2021. Spotify nwere ike inye gị ohere ịnweta ọbá akwụkwọ dị ukwuu n'ịntanetị nke egwu na pọdkastị, nke a ma ama dị ka nke ukwuu. ị nwere ike ige ntị ọdịnaya nke nhọrọ gị mgbe ọ bụla ọ masịrị gị.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye ngwa Spotify na desktọpụ Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa site na iji ụzọ atọ dị iche iche.
Nhọrọ nrụnye mbụ bụ ibubata ebe nchekwa site na Spotify wee wụnye ya site na iji njikwa ngwugwu APT. Nke a ga-abụ ezigbo ngwọta maka ọtụtụ ndị ọrụ, ọkachasị mgbe ị na-edobe ngwugwu ahụ ka ọ dị ọhụrụ.
Nke mbụ, wụnye ihe ndabere ndị a chọrọ iji wụnye Spotify site na iji usoro APT.
Nke abuo, ibubata ebe nchekwa na ọdụ gị, jiri iwu na-esonụ.
Iwu a dị n'elu ga-agbakwunye ebe nchekwa Spotify na-akpaghị aka na ndekọ Ubuntu APT yana ndepụta ya pụrụ iche.
Na-esote, jiri iwu na-esonụ bubata ihe igodo GPG iji kwe ka usoro ahụ tụkwasị obi na ngwugwu ndị a na-agbakwunye na ebe nchekwa.
Na-esote, melite sistemu gị iji gosipụta mgbakwunye ọhụrụ ahụ.
Na repository ota, gaba n'ihu wụnye Spotify iji ndị a.
Nyochaa nrụnye ahụ site na iji iwu amụma apt-cache.
A na-eji ọkọlọtọ edozi mmelite Spotify dabara adaba & kwalite iwu.
Ọ bụrụ na ị chọghị ka etinye Spotify na usoro APT, jiri iwu na-esonụ wepụ ngwugwu ahụ.
Nke a ga-ewepụ ihe ndabere ọ bụla ejiri Spotify arụnyere na mbụ na-akpaghị aka.
Na mgbakwunye, jiri iwu na-esonụ wepụ ndepụta ebe nchekwa.
Nhọrọ nke abụọ bụ iji njikwa ngwugwu Flatpak. E tinyeghị Flatpak na Ubuntu 20.04 na ndabara, mana ọ dị na ebe nchekwa ya.
Nke mbụ, wụnye ngwugwu Flatpak.
Rịba ama ozi ahụ. A ga-ekpuchi nke a ma emechaa.
Ugbu a wụnye Spotify site na iji iwu flatpak na-esonụ.
Pịnye Y ugboro abụọ, pịa pịa Tinye igodo ugboro abụọ ịga n'ihu na nwụnye.
Ị ga-amalitegharị PC gị ma ọ bụrụ na akara ngosi ahụ efuola ma ọ bụ ngwa ahụ anaghị ebido oge mbụ!
Ị nwere ike ịbanye na pụọ ​​na nnọkọ gị ka ịlele akara ngosi ngwa ma ọ bụ jiri iwu njedebe na-esote.
Mara, ọ bụrụ na akara ngosi gị anaghị efu ma malite ngwa gị, wee leghara iwu a dị n'elu anya.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ iji aka kwalite, jiri iwu a.
Iji wepu ụdị Spotify nke Flatpack, mee iwu a:
Pịnye Y Ọzọkwa Tinye igodo ịga n'ihu na mwepụ nke Spotify site na iji usoro Flatpak.
Nhọrọ nke atọ bụ iji njikwa ngwugwu Snap. Site na ndabara, ekwesịrị itinye Snap na nkesa Ubuntu ọ bụla na-akwado.
Ọ bụrụ na i wepụrụ Snap ọzọ, wụnye Snap ọzọ, jiri iwu a:
Na-esote, a na-atụ aro ka ịmalitegharị ọrụ snap n'oge a.
Na-esote, wụnye Spotify ngwugwu site na iji snap:
Dị ka n'elu, nke a na-agwa gị na Spotify e ọma arụnyere na mbipute nọmba.
Ọ bụrụ na ịchọghị ka etinye Spotify, wepụ ya site na iji iwu wepụ Snap.
Ugbu a na ị nwere Spotify ahịa arụnyere, launching nwere ike mere ụzọ abụọ.
Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịmalite Spotify wee jiri ọnụ, ziga ya na ndabere:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe omume > Gosi ngwa > Spotify. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
Ozugbo ị mepee Spotify, ị ga-ahụ ihuenyo ọdịda nke mbụ. Site ebe a, ị nwere ike ịbanye ma ọ bụ mepụta akaụntụ.
Ekele, ị ọma arụnyere na ulo oru Spotify.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye Spotify na desktọpụ Ubuntu 20.04 LTS gị site na iji ụzọ atọ dị iche iche, nke ị nwere ike ịgbanwe n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji otu njikwa ngwugwu karịa nke ọzọ. Ụzọ kachasị atụ aro bụ ịwụnye ebe nchekwa Spotify na APT, mana nhọrọ abụọ siri ike.
N'ozuzu, ọ bara uru ịwụnye Spotify desktọpụ ọkpụkpọ dị ka ọ dị elu karịa ihe ọkpụkpọ weebụ na ma na-arụ ọrụ na anya, yana ọ bụghị na-emechi ihe nchọgharị gị na mberede na-efunahụ Spotify.
Categories Ubuntu Tags Spotify, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Otu esi etinye Liquorix Linux Kernel na Ubuntu 20.04